Politika famerenana | Pharmacy RXS
Aprily 29, 2020 2020-04-29 6:53
Hatramin'ny 1 martsa lasa teo, ny vokatra PPE, disinfectants ary ny vokatra Corona Virus rehetra dia tsy azo averina na averina arakaraka ny fe-potoana iasanay. Ireo baiko ireo dia tsy azo foanana amin'ireo mpanamboatra noho ny fangatahana betsaka.
Ny fiverenana dia miankina amin'ny fanekentsika sy ny fankatoavantsika. Raha ny entana azonao dia tsy ilay entana notapahinao, simba, na tsy feno (faritra tsy hita), na lesoka noho ny lesoka tamin'ny famokarana azafady ampandrenesina ao anatin'ny 7 andro amin'ny alàlan'ny telefaona, fax, na mailaka hangataka fanoloana na famerenam-bola. Raha mampandre anay ianao aorian'ny 7 andro dia mety hanaiky ny fiverenana izahay fa iharan'ny fihenan-tsakafo 25%. Raha te hamerina entana ianao satria tsy ilaina na tadiavina intsony dia mifandraisa aminay ao anatin'ny 7 andro ary miankina amin'ny fanekena anay, dia hanome fahazoan-dàlana ho an'ny varotra miverina izahay, ary haverina aminao ny frais 25% restocking. Ny saram-pandefasana dia tsy azo averina.
Ny lesoka fanatanterahana izay ataontsika ka mahatonga ny fandefasana ireo vokatra tsy marina aminao dia horaisina ihany koa mandritra ny 14 andro aorian'ny andro nividiananao.
Ireo entana dia tsy maintsy averina amin'ny toe-javatra nahatongavan'izy ireo sy tao anaty fonosiny tany am-boalohany. Alohan'ny hiverenanao dia tsy maintsy mahazo kaody Fahazoan-dàlana Miverina voalohany ianao ao anatin'ny fe-potoana fiverenana voalaza etsy ambony. Ny saram-pandaminana 25% dia hampiharina amin'ny fiverenana rehetra izay tsy lesoka tsy tanteraka na fanatanterahana.
Azafady mba ampandrenesina ianao fa raha mahita lesoka ianao alohan'ny handraisana ny entana novidiana na rehefa nahazoana ianao dia mamaritra fa diso ny entana iray na tsia izay tadiavinao azafady mba ampandreneso anay haingana araka izay azo atao. Aza mandà ny fandefasana eo am-baravarana raha misy zavatra tsy mety na nanova ny sainao ianao talohan'ny nifandraisanao voalohany mba hahafahanay mandamina ny fiverenan'ny tahiry azo antoka. Raha ny baiko napetrakao ara-dalàna dia nolavina tamin'ny fotoana nanaterana anao dia handoa ny vidin'ny fandefasana rehetra ianao ary hampody ny entana ary miampy 25% ny saram-pamerenana amin'ny laoniny.
Ny entana sasany dia tsy azo averina. Entana amboarina manokana, entana mitaky fampangatsiahana mandritra ny fitaterana, izay vokarin'ny rà sy / na tsiranoka hafa mety hitera-doza na areti-mifindra. Mifandraisa aminay raha manana fanontaniana momba ny vokatra manokana ianao.
Ny entana sasany dia tsy azo averina raha nosokafana na ampiasaina. Izay entana mety ho mifindra na mifindra aorian'ny fampiasana dia tsy azo averina. Ohatra, ny entana toy ny fikolokoloana ny ratra, ny vokatra vita amin'ny hoditra, ny torolàlana tsy misy ilana azy sy ny vodin-doha, ny fanjaitra ary ny fanariana fanjaitra, ny kofehy fandidiana, ny fonon-tànana, ny kanelina, ny thermometre, ny stethoscope, ary ireo zavatra mifandray aminy.